Masoandron’ny fahamarinana : manadio ny fanahy
"Ka misaotra ny Ray, Izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny Zanany malalany". Kolosiana 1:12,13.
Tombontsoa ho an’izay rehetra mikatsaka amin-kafanam-po indrindra ny fahamarinana sy ny fahitsiana ny mitoky amin’ny teny fikasan’Andriamanitra azo antoka. Asehon’i Jesôsy mazava fa ny haren-tsarobidin’ny fahasoavan’ny lanitra dia azontsika raisina amin’ny fahafenoany mba hahatonga antsika ho fantson’ny fahazavana. Tsy afaka ny handray ny haren’ny fahasoavan’i Kristy isika raha tsy maniry ny hizara izany amin’ny hafa. Rehefa ao am-pontsika ny fitiavan’i Kristy dia ho tsapantsika fa andraikitsika sy tombontsoa ho antsika ny mampita izany. Mandefa ny tarany mazava eny amin’ny lalam-be sy ny lalan-kely rehetra amin’ny fiainana ilay masoandro mamirapiratra eny amin’ny lanitra. Ampy hanazava tontolo an’arivony maro tahaka ny antsika izany. Dia toy izany koa Ilay Masoandron’ny fahamarinana, ireo tarany mazava izay mitondra fahasitranana sy fifaliana dia ampy tokoa hamonjena ny tontolo kely misy antsika ary ampy hametraka fiarovana ao amin’ireo tontolo rehetra efa nohariana (…)
Ireo izay mahatsapa fa mila mibebaka amin’Andriamanitra sy manana finoana an’i Jesôsy Kristy Tompo dia ho torotoro fanahy ka hibebaka tamin’ny nanoherany ny Fanahin’Andriamanitra. Hiaiky ny helony izy tamin’ny nandavany ny fahazavana natosak’Andriamanitra betsaka teo aminy ka dia hahafoy ny ota izay nampalahelo sy nanivaiva ny Fanahin’ny Tompo. Hampietry ny izahony izy ireo ka hanaiky ny hery sy ny fahasoavan’i Kristy sady hanaiky ireo hafatra fampitandremana sy fananarana ary fampaherezana. Ho hita mibaribary avy eo ny finoany ny asan’Andriamanitra ary dia hitoky amin’ilay fanati-panavotana izy. Horaisiny ho an’ny tenany ny fahasoavana sy ny fahamarinan’i Kristy mitafotafo ka ho tonga Mpamonjy azy ireo Izy. Tsapany mantsy ny filàny an’i Kristy ary dia hitoetra ao Aminy amim-pitokiana tanteraka izy. Hisotro amin’ny ranon’aina miboiboika avy amin’ilay Loharano tsy mety ritra avy any an-danitra izy ireo. Amin’ny fanandramana vaovao sy voatahy no hiantorahany eo amin’i Kristy ka hahatonga azy ho mpiara-miombona amin’ny toetran’Andriamanitra koa. — RH, 26 Aogôsitra 1890.